Caadiga ah Alxanka alxanka line Factory - Shiinaha caadiga ah H alxanka alxanka line-saareyaasha, shirkado cusub
Alxanka qalabka kaabayaasha
Xariiqa alwaaxda alwaaxda Hiiran
Mashiinka qodista saxanka birta ah ee otomaatiga ah ee CNC
Madaxa awoodda istiraatiijiga ah ee istiraatiijiga ah ee istiraatiijiga ah wuxuu ogaadaa si buuxda otomaatig u ah habka qodista.
Barnaamjiyada qaab wada hadalka ah, hawl fudud, ku habboon.
Automatic H dogob Mashiinka engeeg Shot
Si loo hubiyo waxqabadka toogashada sare iyo kordhinta adeegga rollers, gal-shiidan sare-chromium shiidi-u adkaysta qalab lagu rakibay rollers qolka si ay u kordhiyaan cimri dhererkiisa adeegyo by dhibco jeer, Automatic H dogob toogtay Mashiinka engeeg.
Automatic H dogob mashiinka toosinta flange
Waxyaabaha duuban ee sare waa 35CrMo, iska caabinta abrasionka ayaa la hagaajiyay ka dib habka daaweynta kuleylka iyo shiidi. Mashiinka toosinta dogobka tooska ah ee H.
Nidaamka xakamaynta korantada wuxuu ka kooban yahay sanduuqa kontoroolka iyo sanduuqa hawlgalka, wuxuu xakameeyaa leexashada / leexashada ee mootada gudbinta ugu weyn iyo matoorka toosiya. Gudiga hawlgalka ayaa lagu rakibay xayndaabka, kaas oo si gooni ah loogu dhejiyay sanduuqa xakamaynta oo leh hawlgal haboon. H mashiinka toosinta tooshka.
Gantry Automatic H dogob arkay line mashiinka alxanka
Tilmaamaha hagaha madaxa hagista Arc waa in si farsamo ahaan loola socdo kor iyo hoos, bidix iyo midig. Mashiinka alxanka gantry h.
Beddelaha soo noqnoqda ee la soo dhoofiyo ayaa awood u leh inuu ogaado albaabka albaabka ama cantilevers xawaaraha stepless H khadka alxanka.
Automatic taagan H dogob qaadashada mashiinka line-soo-saarka
Qaybta ugu weyn ee gudbinta waxay korsataa qalabka loo yaqaan 'cycloid pinwheel' iyo Taiwan 'TAIAN brand inverter', xawaaraha kulanka waxaa lagu hagaajin karaa inta u dhexeysa 0.5-6 M / min.H mashiinka samaynta dogob.
Qaybaha ugu muhiimsan ee mashiinkani waa qaybo qaabdhismeed oo welded leh xoog weyn iyo miisaan fudud. iyo waxyaabaha muhiimka ah ayaa laga khafiifiyey diiqadda, taas oo aan si fudud isu beddelin.H khadka wax soo saarka dogob.